Online teaching will now continue until the last working day of May 2020 (Friday the 29 th May) - SKT International College
Online teaching will now continue until the last working day of May 2020 (Friday the 29 th May)
May 3, 2020 SKT International College
📌Dear valued parent and guardians,
I appreciate that during these challenging times with the Covid virus, that online teaching and learning has faced some challenges. However, I also know that the teaching online has improved significantly during the last 3-4 weeks.
As the Covid-19 virus is still ongoing, please be informed that online teaching will now continue until the last working day of May 2020, which is Friday the 29th May. The school will then break for the summer holidays.
Please do not hesitate to ask any questions via our online portal or indeed, to ask of myself at sktprincipal@bfi-edu.com
Principal, SKT Academy.
📌ခဈြခငျလေးစားရပါသော မိဘမြားနှငျ့ အုပျထိနျးသူမြားခငျဗြာ။
ယခုလို Covid19 ဖွဈပှားနသေောကာလတှငျ online သငျကွားမှု၊သငျယူမှုမြား၌ အခကျအခဲမြား ၊ စိနျချေါမှုမြားကို ကွုံတှနေ့ရေမညျဖွဈကွောငျး ကြှနျုပျ နားလညျသဘောပေါကျထားပါသညျ။ ထိုခကျအခဲမြားရှိ သျောငွားလညျး ပွီးခဲ့သော ၃ ၊ ၄ ပတျအတှငျး၌ ကြောငျးသား/သူမြား online သငျယူမှု အခွအေနေ သိသိသာသာတိုးတကျလာသညျကို သတိပွုမိပါသညျ။
‌လတျတလောတှငျ Covid 19 ရောဂါပြံ့နှံ့မှုဆကျလကျဖွဈပှားနသေဖွငျ့ online သငျကွားမှုကို ၂၉ ရကျ ၊မလေ၊၂၀၂၀ အထိ ဆကျလကျပွုလုပျသှားမညျဖွဈကွောငျးနှငျ့ ၎င်းငျးနောကျ နှရောသီ ကြောငျးပိတျရကျဖွဈပါသဖွငျ့ စာသငျကွားမှုကို ရပျနားထားမညျဖွဈကွောငျး ကွိုတငျ အသိပေးအပျပါသညျ။
သိရှိလိုသညျမြားကို ကြောငျးတယျလီဖုနျး သို့မဟုတျ ကြောငျးအုပျအားတိုကျရိုကျဆကျသှယျလိုပါက sktprincipal@bfi-edu.com သို့လညျးကောငျး ဆကျသှယျမေးမွနျးနိုငျပါသညျ။
ယခု အားလုံးကွုံတှနေ့ရေသော အခကျအခဲမြားကို မိဘမြားမှနားလညျပေးခွငျးနှငျ့ ပံပိုးကူညီပေးမှုမြားအပျေါ အထူးပငျကြေးဇူးတငျရှိပါသညျ။
📌ချစ်ခင်လေးစားရပါသော မိဘများနှင့် အုပ်ထိန်းသူများခင်ဗျာ။
ယခုလို Covid19 ဖြစ်ပွားနေသောကာလတွင် online သင်ကြားမှု၊သင်ယူမှုများ၌ အခက်အခဲများ ၊ စိန်ခေါ်မှုများကို ကြုံတွေ့နေရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ် နားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။ ထိုခက်အခဲများရှိ သော်ငြားလည်း ပြီးခဲ့သော ၃ ၊ ၄ ပတ်အတွင်း၌ ကျောင်းသား/သူများ online သင်ယူမှု အခြေအနေ သိသိသာသာတိုးတက်လာသည်ကို သတိပြုမိပါသည်။
‌လတ်တလောတွင် Covid 19 ရောဂါပျံ့နှံ့မှုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသဖြင့် online သင်ကြားမှုကို ၂၉ ရက် ၊မေလ၊၂၀၂၀ အထိ ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၎င်းနောက် နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်ဖြစ်ပါသဖြင့် စာသင်ကြားမှုကို ရပ်နားထားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင် အသိပေးအပ်ပါသည်။
သိရှိလိုသည်များကို ကျောင်းတယ်လီဖုန်း သို့မဟုတ် ကျောင်းအုပ်အားတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လိုပါက sktprincipal@bfi-edu.com သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ယခု အားလုံးကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများကို မိဘများမှနားလည်ပေးခြင်းနှင့် ပံပိုးကူညီပေးမှုများအပေါ် အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
SKT International College will be closed effective on 18th March, 2020 to 30th April 2020